Mootummaa Wayyaaneef kaardiin Keelloo kenname; diidaan hawaasa Musiliimaas itti fufe! | QEERROO
1 thought on “Mootummaa Wayyaaneef kaardiin Keelloo kenname; diidaan hawaasa Musiliimaas itti fufe!”
Anuwar on August 9, 2013 at 11:56 am said:
Rabbiin jazaa keessan jannataan isiniif haa kaffalu hunda keenyammoo nama qabsoo diinii keenyaa nama irratti jabaatu rabbiin nuu haa taasisu jabaadhaa!!!!!